ရေကူးဝတ်စုံ 2017 - ဆင်မြန်းခြင်းနှင့်အင်္ကျီများကို, ဘောင်းဘီတို, အိတ်, ဦးထုပ်နှင့် shawls, ဖိနပ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ရေကူးဝတ်စုံ 2017 - အသစ်ကခေတ်ရေစီးကြောင်းလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းအကောင်းဆုံးပုံရိပ်များကို
ရေကူးဝတ်စုံ 2017 - တစ်ဦးချင်းစီအလှ၏တစ်ဦးချင်းစီကိုအလေးပေးသောဒီအရသာအသီးထုတ်, ပုံမှန်မဟုတ်သောအရောင် Duet နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စတိုင်များ, စအင်ျကြီ, ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုရေကူးဝတ်စုံ၏ Fusion ကိုတစျဦးပခုံးကိုကျော်တစ်ဦးသိုင်းကြိုးနှင့်အတူရေကူးဝတ်စုံနဲ့, တောက်ပဆက်စပ်ပစ္စည်း။
ရေကူးဝတ်စုံ 2017 - ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ရေကူးဝတ်စုံ - နွေရာသီ 2017 မူရင်း bagatelles နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဗီရို replenish မှတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လကိုးကွယ်သူအများဆုံးရည်မှန်းချက်ကြီးဖက်ရှင်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာသူတို့အဓိကနွေရာသီခေတ်ရေစီးကြောင်းနေသောခေါင်းစဉ်:
အဏ္ဏဝါတီးဝိုင်း။ New York ကဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရေချိုးဝတ်စုံအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းကမ်းခြေအဝတ်၏အလင်း၌သာစင်းထုတ်၏ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်, ခေါင်းလောင်း-အောက်ခြေဘောင်းဘီ, ဆင်မြန်းပြသခဲ့သည်။ asymmetry ၏လူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှာ။ ဒီအဆင်မြန်းခြင်းနှင့်အဝတ်သက်ဆိုင်သည်။ သူတို့ဟာ ruffles နှင့်အတူအလှဆင်ခြင်းကိုပုံမှန်မဟုတ်သောအောက်ခြေရှိသည်လိမ့်မည်။ Valentino ၏ collection များကိုခုနှစ်တွင် Banana Republic , Altuzarra, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအလှတရားတွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါသည်။
Khaki ရှေ့ဆက်အတုလုပ်တဲ့နှင့်မှုန့ရိပ်နှင့်တူညီသောခေါင်းဆောင်မှုအနေအထားယူသည်။ ဒီဇိုင်နာများကာရိုလိုင်းနား Herrra, Hack တဲ့ touch နဲ့အတူအဝတ်အစားနွေရာသီအတွက်ဣတ္နှင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်နိုင်သည်ကိုသက်သေပြဖို့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုထွက် J.Crew ။
2017 ခုနှစ်တွင်ရေကူးဝတ်စုံ - 50 အဝါရောင်အရိပ်။ နွေဦးကတည်းကအမှုအရာ၏ဗီရိုထဲမှာတောက်ပသောအရောင်အဆင်းပေါ်လာသငျ့သညျ။ ဒါဟာနေသာခြင်းနှင့်မျက်စိနှတစ်ခုခုသို့သင့်ရဲ့လေးကိုဖွင့်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ အဝတ်အထည်တစ်ဦးသံပုရာ, ရွှေ, မုန်ညင်း, ပြောင်းဖူးအရောင်များရှိနိုင်ပါသည်။ Delpozo, နည်းပြ, Jason ဝူ၌ဤအလှတရားလေးစားပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ဦးကကထူးဆန်းတဲ့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်, ဒါပေမယ့်အမှုမှာပခုံးနှင့်အတူရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအမှုအရာနှင့်ပြည့်ဝ၏ရေကူးဝတ်စုံ 2017 ။ CG, Tibi, Hellessy ပုံမှန်မဟုတ်သောဒီအရာတစ်ခုခုအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်မှာပိုင်ထိုက်သောအမွှေးအကြိုင်များနှင့်လိင်တစ်ဦးထိတွေ့၏ပုံရိပ်ကိုပေးသည်။
သူမသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြတ်ချစ်သောသူ? ထိုအခါတွဲပခုံးနှင့်အတူ beachwear အာရုံစိုက်။ ယခင်ကအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြလျှင်သင်မတော်တဆကိုက်ကမ်းခြေပါတီစဉ်အတွင်းလျှင်ကြောင့်လက်ပုံရသည်, ဒီမှာသင်ရုံသိုင်းကြိုး sundress အိပ်ပျော်စကားပြောစဉ်အတွင်းမတော်တဆဘယ်လိုအတော်လေးသတိထားမိကြပြီမဟုတ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စတိုင်များအိုတိုမီ, Prabal Gurung, ကိုယ်ပိုင်ပုံတူတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဖက်ရှင်ကမ်းခြေအင်ျကြီ 2017 - အရောင်များ, စ chiffon ၏ပုံစံများတစ်ရောင်စုံအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်အပူဆုံးနေ့, ရှူဖို့ခွင့်ပြု, seductive, ဝါဂွမ်း၏ပုံရိပ်ကိုပေးသည်။ ဒါက Mini ကိုနှင့်သင်လုံခြုံစွာနေတဲ့ကမ်းခြေပါတီပေါ်တွင်တင်နိုင်သည်ကို Maxi အဝတ်။ ဒါဟာပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုးနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအပေါ်အညီအမျှကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ stylist အင်ျကြီများနှင့်ရေကူးဝတ်စုံခြားနားသောအရောင်အဆင်းပေါင်းစပ်ဖို့, စမ်းသပ်ဖို့မကြောက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဖက်ရှင် monotony နှင့်ရောင်စုံပုံစံများဖြစ်သည်။ နောက်တဖန်ရေပန်းစားစပျစ်သီးကိုပန်းထုတ်ရရှိမှု။
ခေတ်မှီကမ်းခြေဆင်မြန်း 2017 - မြင့်မားသောခါးနှင့်အတူဇိမ်ခံပန်း pleated စားဆင်ယင်ဖြစ်ပါတယ်စတိုင်များ ကလေးဒေါ်လာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တန်ချိန်, ဇာထိုးပန်းထိုး MIDI-စားဆင်ယင်, အရာနှင့်ကျယ်ပြန့်ခါးပတ်အကြံပြုထားသည်။ ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ရောင်စုံအစင်းတစ်ဦးရောနှောနှင့်အတူဤအနုပညာ-Pop အဝတ်အစား။ အဆိုပါ drooping ပခုံး (တော်တော်များများရာသီများအတွက်အမှန်တကယ်လမ်းကြောင်းသစ်) နှင့်အတူဤသည်။ ရေကူးဝတ်စုံ 2017 - နေသာအဝါရောင်, အဖြူရောင်, မှုန့ရိပ်, ကောင်းကင်ပြာပြာပြာမျက်စိကွယ်။ စပ်ချုပ်ပညာသို့မဟုတ်အလှဆင် flirtatious ပဲစေ့တွေဟာရဲ့ style အတွက်အဝတ်။
Lyazhnye စတိုင်ဆင်မြန်း 2017
2017 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသမီးသဲသောင်ပြင်ဦးထုပ်မျိုးစုံနှင့်အတူကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည့်စုံပျော်ရွှင်မှုကိုများအတွက်ဿုံအဝတ်အစားမဆိုစတိုင်သို့ fit သောအချို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့ရွေးချယ်စရာနွေရာသီဦးထုပ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမေ့လျော့ကြပါဘူး။ လူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှာ:
ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ် (ဆိုနီယာ Rykiel, အန္န Sui ကို);
ဦးထုပ်ဆင်တူအလှဆင်ရေကူးထုပ် (Miu Miu, Dolce & Gabbana);
berety ပေါ့ပါးပစ္စည်းများအနေဖြင့်ချုပ်နှင့်အတူအလှဆင် ထုတ် , ကွဲပြားခြားနားသောအစင်း (Miu Miu, Dolce & Gabbana) ;
သဲသောင်ပြင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖက်ရှင် 2017 - ကပါတီများ (ခန်းခြောက်ဗန် Noten, Machael Costello) အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဦးထုပ်အဖြစ်တင်ဆက်သောကုလားကာနှင့်အတူဘီးဝန်း, င်;
(Moschino, ပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်) ပန်းနှင့်အတူ sequins နှင့်မိုနိုခရုမ်မော်ဒယ်များနှင့်အတူဘေ့စ်ဘောစပ်ချုပ်ပညာ,
အရာရှိရဲ့ဦးထုပ် (Vivetta, Yohji Yamamoto) ပုံနဲ့တူတဲ့ကမ်းခြေဦးထုပ်,
သဲသောင်ပြင်ဖက်ရှင် 2017 - image ကို (မက်စ်မာရ်, က Nicholas K သည်) ၏ပြီးပြည့်စုံသောပြီးစီးပါလိမ့်မည်သည့် visors,
bandany (Gucci, Giorgio Armani) အဖြစ်ချည်ထားသုံးသောပုဝါ,
ဖက်ရှင်ကမ်းခြေထုပ် 2017 - ကျယ် brimmed ကောက်ရိုးများနှင့်ထည် (Blumarine, ခရစ်ယာန် Siriano) မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်ကမ်းခြေဖိနပ် 2017 - လမ်းလျှောက်နေစဉ်တွင်သင်တို့ကိုမအီဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိပ်တန်းဖက်ရှင်-့ Olympus, Self-အရောင်ကြိုးကိုနဲ့ပြားချပ်ချပ်တစ်ဦးတည်းသောအပေါ်အဆင်ပြေခြေနင်းကိုယူ espadrilles ကားမောင်းနေစဉ်သင်ခံစားရမယ့်ကြိုး grooved ဘဝါးပေါ်မှာ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့နွေရာသီမတ်မတ်, အ Eco-သားရေများလက်မနှင့်ဒုတိယလက်ချောင်းကိုအကြားတစ်ဦးသိုင်းကြိုးနှင့်အတူခြေနင်း, ဂျင်းဘောင်းဘီဖဲကြိုး၏ပုံစံတစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောအလှဆင်နှင့်အတူဂန္ကမ်းခြေရွေးချယ်စရာအချို့ zest ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သောတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့ finish ကိုအတူ clogs ။ ဒီအနိမ့်ပြေးနှင့်အတူကျောက်, ပလက်ဖောင်းခြေနင်းနှင့်အတူအလှဆင်ခုံဖိနပ် shoes ။
ဖက်ရှင်ကမ်းခြေအိတ် 2017 - တောက်ပသောအရောင်အဆင်း, များစွာသောအလှဆင်ဒြပ်စင်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့နှင့်အသေးစားအိတ်ပတ်ပတ်လည်နှင့်စတုရန်းကျောပိုးအိတ်, ခွံသို့မဟုတ်နှလုံး၏ပုံစံအတွက်ဒဏ်လက်မှပါပဲ။ ဒါဟာနေရာတစ်နေရာနှင့်တစ်ဦးပွင့်လင်းသေးငယ်တဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တိုင်းရင်းသားပုံနှိပ် (Monki) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ ပို. ပို. လူကြိုက်များကြောင့်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည့် Hack, ဒါပေမယ့်ပြောက်ကျားပုံစံကိုသာဖြစ်လာနေသည်။ သဲသောင်ပြင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖက်ရှင် 2017 - ဖြစ်ပါသည်:
တစ်ရောင်စုံပန်းပုံနှိပ် (adidas မူရင်းရှိုးပွဲများ) နဲ့သေးသေးလေးကျောပိုးအိတ်;
အရောင်ပနျးပှားကိုတို့နှင့်အတူထည်အိတ်နှင့်ငွေဒင်္ဂါးပြား၏ပုံစံအတွက်မိုးပြာရောင်စပ်ချုပ်ပညာစျေးဝယ်သူ (ASOS) ကိုချုံ့;
အဏ္ဏဝါချွတ် (Missguided) တွင်သဲသောင်ပြင်ကြီးကြပ်မှူး-အိတ်ကို;
တစ်ဆွဲထား-ကျောက်များနှင့် fluffy pompoms (Ted Baker) နဲ့ကြီးမားတဲ့ wicker အတူသိုင်းကြိုး-ကွင်းဆက်အပေါ်သူ၏ပခုံးကိုကျော်သေးငယ်တဲ့အိတ်။
2017 ခုနှစ်ဖက်ရှင် beachwear သေချာပေါက်ထူးခြားတဲ့အရောင်နဲ့မူရင်းဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့မရှိပါ။ တစ်ရိုးရှင်းသောစတိုင်လုပ်ကမ္ဘာကြီးကိုမော်ဒယ်မှပေးအပ်နွေဦး-နွေရာသီ collection များကိုအများအပြားအမှတ်တံဆိပ်။ ယခုရာသီ၏အဓိကလမ်းကြောင်းသစ် - ထိုမတန်တဆခါး, အမြင်အာရုံခြေထောက်သကျတမျးကိုရှညျ။ ပိတ်ချောသို့မဟုတ်ဝါဂွမ်းမော်ဒယ်များမှုဦးစားပေး။ ဒါဟာအက်ဆစ်ရေဆေး (New Look), အကျိုးသက်ရောက်မှု degradation (မြစ်ကျွန်း), ပန်း, print (ဘယ်သူမှမယ့်ကလေး) သို့မဟုတ် patterned လည်စည်းဒိုင်များနှင့်စုတ်တံ (PrettyLittleThing) နဲ့သဲသောင်ပြင်မော်ဒယ်နှင့်အတူဂျင်းဘောင်းဘီတို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအားကစားဘောင်းဘီတိုစေနိုင်ပါတယ်။
သဲသောင်ပြင် 2017 ပုတီး, လက်ကောက်များနှင့်သေးငယ်တဲ့လည်ဆွဲနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းရပါမည်ငန်းရှင်များ။ အလက်ဇန်းဒါး McQueen ကမှာသငျသညျလုံခြုံစွာနေတဲ့ရင်ခုန်စရာရက်စွဲပေါ်တွင်တင်နိုင်သည်ကိုအကြီးအကျယ်ပုတီးနှင့်အတူတန်ဆာဆင်အားလုံးမော်ဒယ်များအပေါ်ပြသထားတယ်။ ရောဘတ် Cavalli ခေတ်မီသူ၏ရူပါရုံကိုတင်ပြ choker တောက်ပသောအရောင်အဆင်း၏ကြီးမားသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ။ Erdem, Elie Saab, ဂျယ်ရမီဖြစ်သူ Scott သာအရောင်သို့မဟုတ်စတိုင်အလားတူပုတီး, ဝတ်ဆင်ရန်ကိုဆက်ကပ်။ ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းလျတ်ကွင်းပုတီး, အထက်လက်မောင်း (Ashish) ရက်နေ့တွင်ဝတ်ဆင် pompons (Balmain) နှင့်လက်ကောက်များ elongated အအလှတရား။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းရေကူးဝတ်စုံ 2017 ဖတ်တယ်:
အခြို့သောလွင်ပြင်များနှင့်ရောင်စုံ Marigold တရံ;
မူရင်းစတိုင်များ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မော်ဒယ်အပြည့်အဝဖြည့်စွက်ရန် 2017 ခုနှစ်တွင်ရေကူးဝတ်စုံ။ သငျသညျယိတစ်ခုခုဝယ်ဖို့လိုပါကအာရုံစိုက်:
မြင့်မားသောခါး khaki နှင့်အတူ romper;
ယင်းဘော်လီပေါ် ruffles နှင့်အတူဝါဂွမ်း jumpsuit;
သဲသောင်ပြင်ရင်ဘတ်နဲ့ထန်းထုတ်မှကွက်ထည့်သွင်းနှင့်အတူ swimsuit fused;
အနံ့တိုတောင်းသောဦးထုပ်အင်္ကျီလက်ပေါ် chiffon ကမ်းခြေဝတ်လုံ။
Trends - အပြည့်အဝအဘို့အရေကူးဝတ်စုံ 2017
သဲသောင်ပြင် Images ကို 2017
2017 ခုနှစ်တွင်သဲသောင်ပြင်သက်တံ့ဗီရိုတစ်ခုတက်ကြွဒြပ်စင်ပါဝင်ရမည်ကပဲအရောင်, ဒါပေမယ့်လည်းဒီဇိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ နွေရာသီမှာတော့အမြဲသဘာဝကပစ္စည်းများ (swimsuit ရေတွက်မထားဘူး) ၏ဖန်ဆင်းအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်။ ဤနည်းဥပဒေအင်္ကျီ, sundresses, romper, ဘောင်းဘီတိုသက်ဆိုင်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှူကြပါစို့။ နွေရာသီမှာတော့ကြိုးနှံနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်အရေးကြီးပါသည် autfite ။ အဆုံးစွန်သောတစ်စဇာနှင့် INSERT အသုံးပြု. အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။
2017 ၏ဖက်ရှင်ကမ်းခြေပုံရိပ်တွေစုံလင်ရဖို့ရန်, တစ်ဦး sexy swimsuit ဝတ်ဆင်။ ဤသည် seductive ရေကူးဝတ်စုံနဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းဇာနှင့်အတူအလှဆင်နက် neckline နှင့်အတူ conjoint အလှအပ, မသာရှိနိုင်ပါသည်။ ဦးစားပေး အတို Sarafanov အခမဲ့ဖြတ်။ ကမ်းခြေ chiffon အင်ျကြီမှသင်တို့နှင့်အတူအယူဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ ဒါဟာကမ်းခြေပေါ်မှာပါတီအဘို့ကြီးစွာသောမတ်မတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
မော်ဒယ် chiffon 2014 blouses
အိတ် - နွေဦး 2015
ဖိနပ် - Trends နွေ-နွေရာသီ 2015
အင်္ကျီ 2017 - နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်လက်ရှိဖက်ရှင်တွေ
Kim Kardashian ကသူမ၏ဒုတိယကလေးမွေးဖွားပေးတော်မူပြီ
အထည်အလိပ် Chilling - ကဘာလဲ?
Lymphocytes တိုးလာ Neutrophils သူငယ်ကိုကျဆင်းသွား
မြင်းစီး - မြင်းစီးအားကစားမျိုးစိတ်များ၏အကောင်းအဆိုး cons ယနေ့
Zakynthos - ဆွဲဆောင်မှုများ
ပိုက်ဆန်ပိတ်ချော - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ကိုယ်ဝန် 30 ပတ်ကြာ - ဘာဖြစ်သွားမလဲ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Jacket Park က Transformer
Digoxin - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ